Wariye Coldoon Oo la Kulmay Madaxda Xisbiga Waddani.(Sawiro) – Awdalmedia
Weriye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo muddo hal sano ka badan u xirnaa maamulka Somaliland, ayaa maanta dib u helay xoriyadiisii. Waxayna sii dayntiisu ku timid cafis uu u fidiyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Weriye Coldoon oo shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa ka gaabsaday marxalada lagu jiro awgeed inuu ka hadlo sharci darradii lagu xiray iyo inuu saxaafada ka dhaleecayo Somaliland.
Wariye Coldoon ayaa intaa kadib kulan la qaatay madaxda xisbiga waddani oo uu hor socday gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro waxa uuna uga mahad celiyay sidii ay uga qayb qaateen siidayntiisa.
Coldoon ayaa sanad kahor lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inuu aflagaado u geystay madaxda Somaliland iyo faafitaanta warar been abuur ah oo lidku ah midnimada Somaliland.
Waxaa uu sheegay sii dayntisisu inay ku timid kadib markii guddoomiyayaasha xibsiyada Wadani iyo Ucid ay madaxweyne Muuse Biixi horgeeyeen codsi ah in xabsiga lagasii daayo weriyaha, taasoo madaxweynuhuna aqbalay.